Tingori Shamwari Kana Kuti Paita Zverudo?—Chikamu 1 | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tiv Turkish Turkmen Twi Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Tingori Shamwari Here Kana Kuti Paita Zverudo Apa?​—Chikamu 1: Zvandiri Kuona Ndizvo Here?
Mukomana iyeye kana kuti musikana iyeye unonyatsomufarira, uye une chokwadi chekuti naiye anonyatsokufarirawo. Apa munogara muchitumirana mameseji, pamunoungana nevamwe munozongopedzisira mava mese. . . , uye mamwe mameseji aanokutumira, anonyatsoratidza kuti anokuda.
Saka unobva wafunga kuti regai ndimubvunze kuti zvakanyatsomira sei, kungoitira kuti uve nechokwadi chekuti zvauri kufunga ndizvo zvaari kufungawo here. Iye ndipo paanobva ati: “Ini ndinongokuona seshamwari yangu chete.”
Chii chinenge chamboitika?
“Ndakagumbuka zvekugumbuka zviya​—ndakamugumbukira, uye ndakazvitukawo! Taigara tichitumirana mameseji mazuva ese, achinyatsoratidza kuti anondifarira. Ini ndaizodiniwo, kunze kwekumufarira?”​—Jasmine.
“Ini nemumwe musikana taigara tichiperekedza mumwe mukomana nemusikana vaidanana. Pane dzimwe nguva, zvaiita sekunge kuti nesuwo tainge tichidanana. Taigara tichitaura tese, tikabva tazotanga kutumirana mameseji asingaperi. Zvakandirwadza paakanditi aingondiona seshamwari chete, uye pandakaziva kuti pese apa anga achitova nemukomana wake.”​—Richard.
“Mumwe mukomana ainditumira mameseji mazuva ese, dzimwe nguva tese tichitokandirana mashoko erudo. Asi pandakamuudza kuti ndaimufarira, akabva ati pwati zvake nekuseka, akanditi, ‘Handisi kufunga zvekudanana nemunhu iye zvino!’ Ndakachema zvekuchema zviya.”​—Tamara.
Saka nyaya iripo chaiyo ndeyekuti: Paunofunga kuti ndiwe chete uri kufarirwa nemumwe munhu, wozozviona pave paya kuti zvingori mupfungwa dzako, haungamboregi kugumbuka, kushaya pekupinda nekunyara, kana kuti kutonzwa sekuti warasiswa. “Ndakapererwa pazvakaitika kwandiri, uye ndakabayiwa pamwoyo,” anodaro mumwe mukomana anonzi Steven. “Zvakanditorera nguva refu kuti ndizotanga zvakare kuvimba nemumwe munhu.”
Kutumirana mameseji uye kushandisa dzimwe nzira dzekushamwaridzana nadzo paIndaneti zvinoita kuti zvive nyore kutanga kuda mumwe munhu asiri kutombokuda. Chimbofunga zvinotaura vamwe vechiduku.
“Munhu anogona kungokutumira meseji zvekungovaraidza nguva, asi iwe unogona kuzvitora sekuti ari kukuda. Ndoda kana achitokutumira mameseji acho mazuva ese, ungatofunga kuti wakosha.”​—Jennifer.
“Mumwe munhu angave achitoda kutanga zverudo, asiri kuita zvekutamba, uku mumwe wacho anenge achingoda hake munhu wekungotaura naye, anongomuita kuti aone kuti anodiwawo.”​—James.
“Meseji yakangonzi ‘urare zvakanaka’ inogona kutotorwa sekuti paita rudo, asi inogona kunge yatumirwa zvisiri kumbobva pamwoyo, sekufarirwa kunoitwa munhu nevanoshambadza zvinhu pafoni.”​—Hailey.
“Ukatumirwa kachiratidzo kechiso chiri kunyemwerera zvinogona kureva kuti ‘Ndiri kungoratidzawo hangu ushamwari’ kana kuti ‘Ndiri kuda kuti ufunge zverudo.’ Dzimwe nguva munhu anotambira meseji yacho anofunga kuti ndezverudo.”​—Alicia.
Saka nyaya iripo chaiyo ndeyekuti: Usafunge kuti kufarirwa kudiwa.
Zviri nyore kuzvitaura pane kuzviita here? Ehe! Bhaibheri rinototaura kuti: “Mwoyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose uye wakaipa kwazvo.” (Jeremiya 17:9) Mwoyo unogona kuita kuti utange kutoona uchidanana nemunhu iyeye asi zvozongoti hwa-a paunozonzwisisa kuti zvanga zvichingova mupfungwa dzako chete.
Ona zvinhu sezvazviri. Usakurumidze kumedza kutsenga kuchada. Zvibvunze kuti, ‘Ndine zvikonzero zvakati tsvikiti here zvekufunga kuti munhu uyu ari kundiitira zvakasiyana nezvaanoitira vamwe?’ Usarega manzwire emwoyo wako achikurira ‘simba rako rokufunga.’​—VaRoma 12:1.
Nzwisisa zviri kuitika. Pazviratidzo zvese zviri kuita kuti ufunge kuti kuwirirana kwenyu kwapfuura pakungovawo shamwari, nyatsofungisisa zviratidzo zviri kuita kuti usave nechokwadi nezvauri kufunga. Kana iwe uchinzwa uchida mumwe munhu, usafunge kuti naiyewo ari kukudawo.
Usamhanye. Usabva waisa mwoyo wako wese pane munhu, kutozosvikira akuudza zvakajeka kuti ari kuda kukuziva zviri nani kuti azodanana newe. Nekuti kana ukabva waisa mwoyo wako wese paari iye asina kukuudza zvakajeka, unozorwadziwa zvakanyanya kana ukaziva kuti haakudi.
Buda pachena. Bhaibheri rinoti kune “nguva yokutaura.” (Muparidzi 3:7) Kana uchida kuziva kuti mumwe munhu haangokuoni seshamwari yake chete, taurirana naye pasina zvekuhwandirana. “Kana iye asiri kufunga semafungire auri kuita iwewe,” anodaro mumwe musikana anonzi Valerie, “zviri nani kuti urwadziwe hako zvishoma iye zvino pane kuti papfuure mwedzi yakawanda usati wazviona kuti munhu iyeye haana kumbobvira akuda.”
Saka nyaya iripo chaiyo ndeyekuti: “Chengetedza mwoyo wako,” inodaro Zvirevo 4:​23. Kana uchifarira mumwe munhu, iva nechokwadi chekuti naiye anokufarirawo here. Kurega rudo ruchitanga kukura usati wava nechokwadi nazvo zvakafanana nekuedza kusima ruva padombo.
Kana ukaziva kuti munhu wacho ari kukuda​—uye iwewe wava pazera rekuti unokwanisa kudanana nemumwe munhu​—zvinenge zvasarira kwauri kuti umuratidzewo rudo kana kuti urege. Usakanganwe kuti, wanano yakasimba inovapo kana murume nemudzimai vaine zvinangwa zvekunamata zvakafanana uyezve vari vanhu vanobudirana pachena uye vanotaurirana chokwadi. (1 VaKorinde 7:​39) Kutaura zvazviri, vanofanira kunge vakatanga vari shamwari dzepedyo, zvoramba zvakadaro.​—Zvirevo 5:​18.
Ongorora Kuti Paita Zverudo Here
Shamwari yako ingaona sekuti uri kuda zvinodarika kungova shamwari chete here? Chimbonzwa mazano aya.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Tingori Shamwari Here Kana Kuti Paita Zverudo Apa?​—Chikamu 1: Zvandiri Kuona Ndizvo Here?
ijwyp nyaya 55
Rudo Rwechokwadi Here Kana Kuti Harusi?